Norombahin’izy ireo tamin’ny alalan’ny isa 12 no ho 0 ny anaram-boninahitra tompondakan’Analamanga teo amin’ny vehivavy nanoloana ny SC Besarety omaly teny amin’ny kianjaben’i Mahamasina.
Teo amin’ny diviziona voalohany elita voalohany lehilahy dia sempotra ihany vao tafavoaka teo anatrehan’Ikopa ny 3FB. Nanampy izany ihany koa ny fahazoan’i Rija sy Tantely ny mpilalao mendrika, izay samy avy ao amin’ny 3FB avokoa. Vola mitentina 100 000 ariary avy miampy amboara no azon’izy mianadahy ireo.
Efa tany amin’ny minitra faha-70 vao niezaka ny niala fitoviana isa ry José sy ny namany tamin’ny alalan’ny baolina naterin’ity farany sady voatsaran’i Rija (31 no ho 19). Isan’ny olana ho an’ireto ekipan’Andohatapenaka ireto ny fialan’i Donald tsy satry, izay isan’ireo andrin’ity ekipa ity noho ny dona nahazo azy teo amin’ny lohany tamin’ny fizaram-potoana voalohany. « Nidina dia nidina ny herim-pon’ireo mpilalaonay tamin’ny fialan’i Donald », hoy i Jonah Andriakoto, mpanazatra an’Ikopa. « Nanampy trotraka izany ihany koa ny baolina noentin-tanana notsipahin’ny mpitsara, izay tokony hitarika fandresena ho anay », hoy ihany izy.
Teo amin’ny fanolorana amboara dia efa saika tsy hiakatra haka ny ankarany izy ireo. Hanomboka amin’ny sabotsy iza indray ny « Top 8 » na ny fiadiana ny ho tompndakan’i Madagasikara eo amin’ny diviziona voahany.